Dubai - Tunis ugbu a kwa ụbọchị na Emirates
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Njem azụmahịa » Dubai - Tunis ugbu a kwa ụbọchị na Emirates
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ kacha ọhụrụ na Tunisia • Akwụkwọ akụkọ USA
Emirates kwughachiri nkwa ya na Tunisia site na ịba ụba ugboro ụgbọ elu dị n'etiti Dubai na Tunis site na isii ruo asaa n'izu bido na 30th October 2017.
Ndị ọzọ Dubai - a ga-ejikwa ụgbọ elu Tunis rụọ ụbọchị Mọnde ọ bụla yana ụgbọ elu Emirates Boeing 777-300ER nke na-enye ụlọ ime ụlọ asatọ dị oke ọnụ na klaasị mbụ, oche 42 dị na Business Class na ọtụtụ ụlọ iji zuru ike na klaasị akụ na ụba na oche 310. Gbọ elu agbakwunyere ga-enye ndị njem nọ na Tunisia ohere ka ukwuu na ọdụ ụgbọ njem nke ụwa, ọkachasị ebe na Middle East, GCC, West Asia, Asia Pacific region na US, na-enwe naanị otu ebe na Dubai.
Oge agbakwunyere ga-enyekwa ndị na-ebubata ngwaahịa na ndị na-ebupụ ngwaahịa ọzọ tọn 23 nke ibu ibu na mpaghara ọ bụla. Ngwongwo ndi amaara n’etiti Tunisia na Dubai gunyere nkpuru osisi na akwukwo nri, nri ohuru na nke oyi kpọnwụrụ, ngwa elektrọnik, gwongworo na ụbọchị.
Odude na nnukwu Osimiri Mediterenian, n'azụ ọdọ mmiri nke Tunis na ọdụ ụgbọ mmiri nke La Goulette, Tunis bụ ebe ama ama maka ndị njem mba ụwa nwere saịtị nketa ya na ndụ ndị dị n'ụsọ osimiri. A maara ya maka ụlọ ngosi ihe mgbe ochie ya, ochie souks na ọdịbendị na-eme nke ọma. Ebe ndị njem nleta na-ekpo ọkụ gụnyere El Djem, nke a maara dịka mgbidi nke amphitheater ndị Rom siri ike; Sidi Bou Said, ebe nka mara mma nke di n’elu elu ugwu di elu ma leghara Oke Osimiri Mediterenian; na Carthage, onye bụbu onye iro Rom. Maka ndị njem nleta na-achọ ụzọ mgbapụ n'ụsọ osimiri, Hammamet na Djerba na-enye ọmarịcha ájá ájá. Sousse bụ ebe ndị njem nlegharị anya ọzọ na-anabata ọtụtụ nde ndị ọbịa kwa afọ na-enwe ọtụtụ ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, ụlọ oriri na ọ nightụ nightụ, casinos, osimiri na ebe egwuregwu.
Kemgbe Ọktọba 2006, mgbe ọrụ izizi malitere na Tunis, Emirates buru ihe karịrị otu nde ndị njem na ihe karịrị 60,000 tọn ibu ruo ugbu a. N'ụwa niile, ụgbọ elu ahụ na-ewe ihe karịrị ụmụ amaala 500 ndị Tunisia n'ọtụtụ ọrụ dị iche iche n'ofe Emirates Group, gụnyere ndị ọrụ nchekwa ụlọ 200.